Wararka - Sida loo helo kalsoonida macaamiisha iskaashiga ugu horreeya
Sida loo helo kalsoonida macaamiisha iskaashiga ugu horreeya
Marka laga hadlayo mashiinka warshadaha ee laga iibsanayo macaamiisha Shisheeye, qodobadee ayaa ah qodobada ugu muhiimsan ee macaamil ganacsi?
Hadda waxaan jeclaan lahayn inaan ka wada hadalno arrintan mid ka mid ah kiiskii aan dhowaan soo aragnay.
Taariikhda hore: Cali wuxuu ka yimid mid ka mid ah wax soosaarayaasha magaalada Los Angels, USA, shirkaddu waxay u baahan tahay inay iibsato White fir fircoon caraf udgoon qurxinta wareega mashiinka dhalada caag ah 25ml dhalo caag ah oo leh 6 ulood oo alwaax ah. Sideen ku samayn karnaa kiiskan?
Soo bandhigida dhibaatooyinka macaamiisha soo food saaray: Weligood horay ugama aysan soo iibsan Shiinaha. Wax soo iibintoodii hore waxaa lagu sameeyay EBay; Markaa khibrad uma lihi arrimaha kale ee khuseeya ganacsiga caalamiga.
Tusaale ahaan, waxay si deg-deg ah ugu baahan yihiin mashiinka, laakiin ma aysan tixgelin in mashiinka noocan ah ee warshadaha ah loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida macmiilka, waxay u baahan doontaa waqti dheeri ah. Laakiin waxay xisaabiyeen maalinta rarka. Waxaa sidoo kale jira waxyaabo kale oo badan oo saameyn ku yeelan doona keenista qashinka, sida lacag bixinta TT, iyagu ma lahan khibrad inta maalmood ay ku imaaneyso koontadayada. Marka waxaan u baahanahay inaan ka fikirno inaan siino talooyinka ugu fiican sida lagu heli karo lacagtooda sida ugu dhaqsaha badan si aan u bilaabi karno wax soo saarka sida ugu dhaqsaha badan.
Marka la eego dhibaatooyinka kor ku xusan, waxaan u baahanahay inaan siino jawaab celin xirfadeed macmiilka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si waqtiga loo ilaaliyo.
3.U siiso macaamilka soo jeedinta ku habboon. injineeradeenu waxay adeegsadaan CAD si ay u sameeyaan sawir gacmeedyo. Waxaa ka mid ah quudinta ujawaabidda, gudbinta, koodhka koodhka, mashiinka calaamadda dhalada wareega (goobada buuxa), qalabka calaamadda dusha sare, miiska ururinta laba jibaaran iwm, oo leh cabbirka iyo qaabeynta Iyadoo aan loo eegin macaamilku waa xirfadle iibsade ama maahan, waxaan horay u sii qorsheynnaa qorshooyin iyo faahfaahin.
4.Faahfaahin dhibaatooyinka jira ayaa dhacay: Xarunta dhalada macmiilka ee cuf isjiidadka ma dheelitirneyn, sida loo hubiyo: 1) xasilloonida calaamadeynta mashiinka; 2) labada daraf ee sumadda ayaa iswaafaqsan; 3) xawaaruhu wuxuu gaarayaa 120 dhalo daqiiqadiiba sida uu dalbado macmiilku. Markii aan ka wada hadalnay kiiskan ka hor inta aan la xaqiijin amarka, waxaan u soo jeedinnay macmiilka inuu u diro dhalada oo uu calaamadeeyo muunadaha sida ugu dhakhsaha badan. Markii aan helnay shaybaarka (dhalooyinka, duubista calaamadaha, iwm.). Injineerkeenu wuxuu wax ka badalay sawirka qaabdhismeedka qayb ahaan, wuxuu u beddelaa nooca astaanta giraangirta xiddiglaha si loo hagaajiyo xawaaraha calaamadeynta illaa 120 dhalo daqiiqaddii.
5. Soo jeedi in la isticmaalo hawo-qaboojiye si loo hubiyo in mashiinku ku yimaado waqtigiisa iyadoo la tixgelinayo oo keliya 10 maalmood oo ka hadhay muddada wax soo saarka. Xaaladdaan oo kale, waxaan ku xaqiijinay dhammaan tillaabooyinka waaxda wax soo saarka in alaabta ceyriinka ah ee horay loo sii diyaarin doono iyo waaxda wax soo saarkeennu ay ku shaqeeyaan waqti dheeri ah si mashiinka loogu dhammeeyo waqti aad u yar si loo buuxiyo shuruudaha wax soo saar ee macmiilka.
Dadaalkeenna wadajirka ah, waxaan si guul leh ugu buuxinay amarka xariiqa mashiinka calaamadeynta macaamiisha markii ugu horreysay si hufan.
Waqtiga dhejinta: Dec-15-2019